ဆက်သွယ်ရေးမှို - တရုတ် Ningbo Beilun Daqi Hongxiang
မြန်နှုန်းမြင့် CNC စက်
အလူမီနီမှို ချ. သေဆုံး
R & D အသင်း
Runner ခြင်း simulation
အရည်အသွေးမြင့်မားစိတ်ကြိုက်လူမီနီယံမှို / လက်ဆောင် / သေဆုံး & တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ချ. သေ
မူလအစရာ: Zhejiang, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
မော်ဒယ်အရေအတွက်: HX10091die မှို ချ.
ပုံသဏ္ဍာန် Mode ကို: Die ကာစ်
မှိုTechnical ing: ချ. သေဆုံး
မှိုပစ္စည်း: DIEVAR, SKD61, H13,8407, etc ။
ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကို: PROE, UG, CAD
မှိုအခြေစိုက်စခန်း: နျ Standard C45
မှိုဘဝကို: 100000 ရိုက်ချက်များမှ 50000shots
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အရည်အသွေးမြင့်လူမီနီယံသေ ချ. မှို
လက်မှတ်: ISO9001: 2008
သစ်သား box ထဲမှာမှို ချ. တစ်ဦးချင်းစီလူမီနီယံသေထားပါ
အစိတ်အပိုင်း ပုံစံ HX10091
မှိုIng Technical ချ. သေဆုံး
ပစ္စည်း ADC12, A380, AlSi12, A356, ZL102, YL104, YL112, YL113,
မျက်နှာပြင်ကုသမှု Sandblasting, ပန်းချီ, Powder အပေါ်ယံပိုင်း, Anodize,
သွပ်ရည်စိမ်, Chrome ကိုများတွင်လည်းကောင်း, နီကယ်များတွင်လည်းကောင်း, စသည်တို့။
မှို ချ. သေဆုံး ဂလိုင် လူပျိုသို့မဟုတ်အကွိမျမြားစှာ
ပစ္စည်း H13, DIEVAR, QDN, 8407,2344V, TQ1,2343, SKD61,
45 # သံမဏိ, etc ။
အပူကုသမှု သင်တို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာ, nitride
ခိုင်မာသော HRC50 ~ 55
မှိုအင်္ဂါရပ် အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်း, Novell ဖွဲ့စည်းပုံ, အမြင့်တိ,
အရည်အသွေးပစ္စည်းများ, Long ကတစ်သက်တာ, က Short ပေးပို့အချိန်
ပစ္စည်းကရိယာ CNC တိကျမှိုထွင်းထုစက်, CNC ဖွဲ့စည်းရန်စက်,
CNC ကွေ့, EDM, စက်ဖြတ်တောက် Linear, စက် (200T) အစက်စက်ကျခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည် Die,
စက် (180T ~ 1250T) ချ. Die, တွင်ခုံ, စက်ကြိတ်;
CMM, ပစ္စည်း detector, စသည်တို့ခွန်အားဖြစ်စမ်းသပ်ကိရိယာ spectrograph ။
Software များ စသည်တို့ကိုဂျပန်, အမေရိက FLOW3D.v9.2 ၏ CAD, UG, Pro ကို / E ကို, JSCAST-V8
အရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် UKAS & SGS ISO9001: 2008
အားသာချက် အရည်အသွေး ဂရုတစိုက်အမြဲတိုင်းအသေးစိတ်အောင်အပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆို
ဝန်ဆောင်မှု 1. နေရာတိုင်းနှင့်အခါတိုင်းသင်မေးခွန်းတစ်ခုကိုပေးပို့အမြဲတမ်း
ထက်ပိုမို2အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်းမဟုတ်ဖြေကြားရ။
2. တဲ့အခါမှာအမြဲ, စီမံကိန်းကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ကာလအတွင်းဒုက္ခရှိတယ်
R & D သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းအပေါ်ပေါများအတွေ့အကြုံနှင့်လိမ္မာသော technique ကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြိုဆို, ယုံကြည်နေသည်ကိုမြင်လျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်မည်!
ပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ကြိုဆိုပါတယ်။ Ningbo HONGXIANG မှိုစက် CO ။ , Ltd မှဿုံအတူတကွသင်နှင့်အတူအချို့သောသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းစီမံကိန်းများပြီးစီးချင်တယ်။
ပြွန်နှင့်လူ့အချက်များစသည်တို့ကို, သင်စက်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါရက်စွဲကနေ 18 လသို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်းပြီးဆုံးသည့်အခါ 12 လ၏ မှလွဲ. အာမခံနှင့်တပြင်လုံးကိုစက်များအတွက်ပြီးနောက်-ရောင်းချခြင်းန်ဆောင်မှုများတစ်နှစ်အာမခံကာလ;
မြေတပြင်လုံးစက်အသက်အတွက်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများ, အီးမေးလ်ကနေ 24 နာရီနည်းပညာပံ့ပိုးမှု;
အလုပ်လုပ်အချိန်ကာလအတွင်း 86-0577-65905955 86-13356198899 ဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ကို Call;
UPS-ဖော်ရွေအင်္ဂလိပ်ဖျ-ထည်, အသုံးပြုသူကို manual နှင့် installaton & debuggin များအတွက် expericed ပညာရှင်များပေးပို့
T / T တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်အသုံးပြုပုံသို့မဟုတ် Alibaba ကုန်သွယ်မှုအာမခံချက်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုပုံသို့မဟုတ် West ပြည်ထောင်စုက, ဒါမှမဟုတ်ငွေသား။
ကျနော်တို့ကအမိန့်ထားပြီးနောက် 4. ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစက်အရည်အသွေးကိုအကြောင်းကိုသေချာစေနိုင်သနည်း
သငျသညျအသှေးစစျဆေးဖို့အတှကျအပို့ဆောင်မှုမပြုမီ, ငါတို့သည်သင်တို့တျပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပေးပို့ကြလိမ့်မည်, စသင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်တတိယပါတီစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းမှာသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်စစ်ဆေးခြင်းကိုအဘို့အစီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်လက်မှတ်သတိပြုပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမယုံကြည်ကြပါလျှင်, ထိုငါတို့သည်သင်တို့၏ပိုက်ဆံအာမခံ, LC အားဖြင့် Alibaba ကုန်သွယ်မှုအာမခံချက်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုကိုသုံးနိုင်သည်။
ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာစက်တွေထုပ်ပိုးအတွက် professtional ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျွန်တော်ပိုကောင်းပေးပြီးနောက်-ရောင်းအား
မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မျှော်လင့်စသည်တို့ကိုအမြန်နှုန်း, အိတ်အရှည်မြင့်မား max ကိုထုတ်ကုန်,!
ပြွန်နှင့်လူ့အချက်များစသည်တို့ကို, သင်စက်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါရက်စွဲကနေ 18 လသို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်းပြီးဆုံးသည့်အခါ 12 လ၏ မှလွဲ. အာမခံနှင့်တပြင်လုံးကိုစက်များအတွက်ပြီးနောက်-ရောင်းချခြင်းန်ဆောင်မှုများတစ်နှစ်အာမခံကာလ; မြေတပြင်လုံးစက်အသက်အတွက်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများ, အီးမေးလ်ကနေ 24 နာရီနည်းပညာပံ့ပိုးမှု; အလုပ်လုပ်အချိန်ကာလအတွင်း 86-0577-65905955 86-13356198899 ဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ကို Call; UPS-ဖော်ရွေအင်္ဂလိပ်ဖျ-ထည်, အသုံးပြုသူကို manual နှင့် installaton & debuggin များအတွက် expericed ပညာရှင်များပေးပို့ 1. သင့်ရဲ့စက်ကိုကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါသလား? ငါတို့သည်သင်တို့၏တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီသင်အဆိုပြုချက်ကိုကိုငါပေးမည်။ တိုင်းစက်ကောင်းကောင်းသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ 2. သင်စက်ရုံသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသလား ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာဒီမျဉ်းလုပ်နေတာ, စက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ 3. သင့်ငွေပေးချေမှုလမ်းကဘာလဲ? T / T တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်အသုံးပြုပုံသို့မဟုတ် Alibaba ကုန်သွယ်မှုအာမခံချက်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုပုံသို့မဟုတ် West ပြည်ထောင်စုက, ဒါမှမဟုတ်ငွေသား။ ကျနော်တို့ကအမိန့်ထားပြီးနောက် 4. ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစက်အရည်အသွေးကိုအကြောင်းကိုသေချာစေနိုင်သနည်း သငျသညျအသှေးစစျဆေးဖို့အတှကျအပို့ဆောင်မှုမပြုမီ, ငါတို့သည်သင်တို့တျပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပေးပို့ကြလိမ့်မည်, စသင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်တတိယပါတီစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းမှာသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်စစ်ဆေးခြင်းကိုအဘို့အစီစဉ်နိုင်ပါတယ်။ 5. ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပိုက်ဆံပေးပို့ပြီးနောက်သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုစက်မပို့ပါလိမ့်မယ်ကြောက်လန့်ရှိပါသလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်လက်မှတ်သတိပြုပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမယုံကြည်ကြပါလျှင်, ထိုငါတို့သည်သင်တို့၏ပိုက်ဆံအာမခံ, LC အားဖြင့် Alibaba ကုန်သွယ်မှုအာမခံချက်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုကိုသုံးနိုင်သည်။ 6. ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်သင့်ကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်သင့်သလဲ ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာစက်တွေထုပ်ပိုးအတွက် professtional ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျနော်တို့ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပိုကောင်းသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏သဘောတူညီမှုအဘို့အဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှုအာမခံပါသည်။ ပိုပြီးစက်တွေအသေးစိတ်ကိုသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများ 7.Need? Mr.Jim တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ! ငါတို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့သောထုပ်ပိုးအတိုင်း, သင်တို့၏အသေးစိတ်ဝယ်လိုအားအညီစက်တွေကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ကြသည် မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မျှော်လင့်စသည်တို့ကိုအမြန်နှုန်း, အိတ်အရှည်မြင့်မား max ကိုထုတ်ကုန်,!
နောက်တစ်ခု: valve ခန္ဓာကိုယ်မှို
Cast သုံးရန်မှို Die
ဘောင်အောက်မှာအမေရိကန် Polaris မော်တော်ဆိုင်ကယ်
CX ဆက်သွယ်ရေးအပိုင်း 1
CX ဆက်သွယ်ရေးအပိုင်း 2
ဂျာမန်မန်း & ဒေါ့မွန် filter ကိုယျခန်ဓာကို
အိန္ဒိယ TATA ဂီယာအုံအိုးအိမ်မှို 1600T
နေရပ်လိပ်စာ: No.98 Qinglin စက်မှုလက်မှုဇုန်, Daqi, Beilun, Ningbo, တရုတ်။ PC ကွန်ပျူတာ: 315827
- နေဖြင့်ပါဝါ Globalso.com